फार्मेसी सञ्चालक भन्छन्- हामीले सिटामोल पाउँदैनौं, बिरामीलाई कसरी दिनु? :: Setopati
फार्मेसी सञ्चालक भन्छन्- हामीले सिटामोल पाउँदैनौं, बिरामीलाई कसरी दिनु?
निर्मला घिमिरे काठमाडौं, भदौ १६
ललितपुर, नयाँबाटो बस्दै आएकी शर्मिला भुजेलका श्रीमानलाई ज्वरो आएको थियो। अहिले कोरोनासँगै मौसमी फ्लुको प्रभाव बढेको छ। शर्मिलाका श्रीमानलाई पनि फ्लुले च्याप्यो।
शर्मिला उनका लागि सिटामोल किन्न हिँडिन्। नजिकका सबै मेडिकल चहारिन्। सिटामोल पाइएन। झन्डै आधा घन्टा खोजेपछि बल्ल ठाडोढुंगास्थित एक फार्मेसीमा फेला पारिन्।
'श्रीमानलाई ज्वरोले च्यापेको छ। नजिकैका औषधि पसल कुनैले छ भनेनन्। धन्न यहाँ रहेछ,' सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्।
भोटेबहाल बस्ने कर्णबहादुर मगर पनि सिटामोल खोज्दै-खोज्दै वीर अस्पतालै पुग्नुपरेको बताउँछन्। आसपासका कुनै मेडिकलमा सिटामोल नपाएको उनले बताए।
शर्मिला र कर्णबहादुरकै जस्तो अनुभव भएका उपभोक्ता धेरै छन्। कोभिड महामारी चुलिएदेखि नै उपभोक्ताले सहजै सिटामोल पाउन सकेका छैनन्। कतिपयले नजिकै मेडिकलमा सिटामोल नपाउँदा सिटामोलको मात्रा भएका साइनक्स जस्ता अन्य औषधि लैजाने गरेको पनि पाइएको छ।
औषधि बिक्रेताहरूका अनुसार सिटामोलसँगै डक्सिसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, भिटामिन सी, एन्टिबायोटिकहरू, जिंक चक्की, स्टेरोइड लगायत अरू औषधि पनि अभाव छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सिटामोलको माग उच्च रहेको तर त्यहीअनुसार उद्योगबाट नआउँदा अभाव सिर्जना भएको वितरकहरू बताउँछन्।
'पाँच बट्टा सिटामोलको माग छ भने एक बट्टा दिन पनि मुश्किल परेको छ। कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुँदैन,' क्षेत्रपाटीस्थित औषधिका थोक बिक्रेता बाबुराम पाण्डेले भने। कुनै बेला बजारमा सिटामोल कम आउने, कुनै बेला आउँदै नआउनाले अभाव भइरहेको उनले बताए।
रातोपुलस्थित सर्वनिदान फार्मेसीका फार्मेसिस्ट कविन मलेकू पनि पछिल्लो समय सिटामोल निकै अभाव भएको बताउँछन्।
'बजारमा छिटफुट पारासिटामोल आउँछ, जसको पहुँच छ उसले पाउँछ। पहुँच नभएका फार्मेसीलाई सिटामोल पाउनै गाह्रो छ। हामीले सिटामोल नपाएपछि बिरामीलाई कसरी दिनु?,' उनले प्रश्न गरे। आफूले पनि कतिपय बिरामीलाई सिटामोलको मात्रा भएका औषधि दिएर पठाउने गरेको उनले बताए।
'बिरामीहरू सिटामोल किन्न अस्पताल पुग्नु हुन्न। नजिकैको मेडिकल तथा फार्मेसी नै हो जाने। धाउँदा-धाउँदा पनि सिटामोल नपाएपछि हामी वैकल्पिक औषधि दिन बाध्य छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
ललितपुर ठाडो ढुंगास्थित प्रदूमन फार्मेसीकी सावित्री चौधरी कोभिड महामारीयता सिटामोल बेलाबखत अभावै भइरहेको बताउँछिन्।
'कहिले पाइन्छ, कहिले पाइँदैन। हामीले नै नपाएपछि ग्राहकलाई खाली हात पठाउनुपर्छ,' उनले भनिन्।
नेपालमा सिटामोल उत्पादन गर्ने दर्जन बढी कम्पनी छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि उत्पादन गरिरहेको छ। यसका बाबजुद कोभिडयता सिटामोल अभाव भइरहेको छ।
कच्चापदार्थको मूल्य वृद्धि भएको तर सिटामोलको अधिकतम मूल्य वर्षौंअघिकै कायम भएकाले उल्लेख्य रूपमा उत्पादन गर्न नसकिएको उत्पादकहरू बताउँछन्। सरकारले २०६४ सालमै तोकेको मूल्य हालसम्म कायम रहेको तर कच्चापदार्थको भाउ तीन-चार गुणाले वृद्धि भएकाले उत्पादन लागत नै उठाउन मुश्किल पर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थामा घाटा खाएर पनि उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको र सरकारलाई समेत सहयोग गरेको सिटामोल उत्पादक प्रज्वलजंग पाण्डे बताउँछन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले महामारीमा सरकारलाई चालीस लाख बढीको सिटामोल निःशुल्क उपलब्ध गराएको दावी गरे। बजारमा हल्ला भएजस्तो चरम अभाव भने हुन नदिएको उनको भनाइ छ।
'हामी घाटा खाएर भए पनि उत्पादन गरिरहेका छौं। सरकारसँग समन्वय गरेर अभाव भएको ठाउँमा पुर्‍याइरहेका छौं। भारतबाट पनि आयात नभएकाले अभाव बढेको हो,' पाण्डेले भने।
सरकारले २०६४ सालमा पारासिटामोल, जीवनजल लगायत विभिन्न २१ प्रकारका औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको थियो। २०७२ सालमा पनि थप ९६ औषधिको मूल्य समायोजन भएको थियो। तोकेको अधिकतम मूल्यअनुसार सिटामोल प्रतिट्याब्लेट एक रूपैयाँमा बेच्नुपर्छ। डेढ रूपैयाँ लागत पर्ने सिटामोललाई प्रतिट्याब्लेट एक रूपैयाँमा घाटा खाएर बेच्नु परेको उत्पादकहरूको गुनासो छ।
स्वचालित मूल्य हुनुपर्ने माग आफूहरूले राखे पनि समायोजन नभएको उनीहरू बताउँछन्।
सरकारले पनि अत्यावश्यक औषधिको मूल्य वृद्धि नहोस् भनेर २०७२ सालमा मूल्य पारदर्शी र स्वचालित गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको परामर्श परिषदले औषधि व्यवस्था विभागलाई कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
सो निर्देशन बमोजिम कार्यविधि तय गरी मन्त्रालयबाट पठाएको थियो। तर कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन। उक्त कार्यविधि विभागमै फर्काइएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। सम्बन्धित सरोकारवालाबीच कुरा नमिल्दा कार्यविधि तय हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अत्यावश्यक औषधि सिटामोल अभाव हुन नदिन सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उत्पादकहरूको भनाइ छ। त्यस्तै विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याउँदा सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
औषधि व्यवस्था विभागले पनि बजारको अवस्थाबारे बेलाबेला जानकारी लिइरहनुपर्ने औषधि बिक्रेताहरू बताउँछन्। सिटामोल नपाएको अवस्थामा यसको मात्रा भएका अन्य औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विभागले सूसुचित गराए केही सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।
औषधि व्यवस्था विभाग सूचना अधिकारी सन्तोष केसी कोभिडका कारण माग अत्यधिक बढेको र उत्पादन घट्नुले बजारमा सिटामोल अभाव रहेको स्वीकार गर्छन्।
'कच्चापदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेका कारण उत्पादन लागत पनि बढ्न गइ उल्लेख्य उत्पादन गर्न नसकिएको व्यवसायीको गुनासो छ। त्यस्तै भारतबाट पनि सामान्य अवस्थाको जसरी सिटामोल आउन सकेको छैन। भारतमा चर्को मूल्य तिरेर नेपालमा सस्तो बेच्नुपर्ने बाध्यताका कारण ल्याउन समस्या देखिएको छ,' उनले भने।
बजारमा सिटामोल अभाव हुन नदिन आफूले औषधि उत्पादकलाई झक्झकाइरहेको उनी बताउँछन्। मूल्यका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि छलफल गरिरहेको उनले बताए।
'हामीले निर्धारण गरेको सिटामोलको अधिकतम मूल्य समायोजनका लागि छलफल गरिरहेका छौं। छिट्टै नै वैज्ञानिक ढंगले मूल्य समायोजन गर्ने गरी विभागले पहल गरिरहेको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भारतमा पारासिटामोल महँगो पर्ने भएकाले तस्करीको आशंका समेत गरिएको छ। नेपालमा प्रतिट्याब्लेट एक रूपैयाँ पर्ने सिटामोल भारतमा सवा दुई रूपैयाँसम्म रहेको उल्लेख छ। यसले गर्दा पनि तस्करी हुन सक्ने आशंका गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १६, २०७८, १९:२९:००
समूह बनाउने बहानामा झण्डै ७० लाख ठगेर सुगम फरार भएको पीडित पक्षको दाबी
रक्षा मन्त्री रिजालले गरे बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण
सुदूरपश्चिममा बाढी-पहिरोबाट ३५ को मृत्यु, अझै २२ बेपत्ता